Otu esi ekwurịta okwu nke ọma n'ime ụlọ ọrụ ahụ
Nkwurịta okwu abụghịzi ọrụ “dị nro”.
Nkwurịta okwu nwere ike melite arụmọrụ ụlọ ọrụ ma mee ka azụmaahịa na -aga nke ọma. Kedu otu anyị ga -esi guzobe nkwukọrịta dị mma yana njikwa mgbanwe?
Isi: Ịghọta omenala na akparamagwa
Ebumnuche nke nkwukọrịta dị mma na njikwa mgbanwe bụ ịkwalite omume dị mma nke ndị ọrụ, mana ọ bụrụ na enweghị ọdịbendị ụlọ ọrụ na mmata omume dị ka ntọala, enwere ike belata ohere ụlọ ọrụ nke ọma.
Ọ bụrụ na enweghị ike ịkwali ndị ọrụ isonye na ịzaghachi nke ọma, ọbụlagodi atụmatụ azụmaahịa kachasị ama nwere ike ịda. Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ na -atụpụta atụmatụ atụmatụ ọhụrụ, mgbe ahụ ndị ọrụ niile kwesịrị ịdị na -eme echiche ọhụrụ ma na -ekerịta ibe ha echiche ọhụrụ. Companieslọ ọrụ ndị na -eme nke ọma ga -arụsi ọrụ ike wulite omenala nhazi nke kwekọrọ na atụmatụ ụlọ ọrụ ha.
Omume ndị a na -ahụkarị gụnyere: ịkọwa otu ndị ọrụ na ihe omenala dị mkpa iji kwado ebumnuche ụlọ ọrụ; ikewapụta ndị ọrụ nke ụlọ ọrụ ahụ na ịkọwa ihe nwere ike ịkpali akparamagwa nke otu ndị ọrụ dị iche iche ka ha nwee ike nyere ụlọ ọrụ aka imezu ebumnuche ya; dị ka ozi a dị n'elu, Hazie ọnọdụ ọrụ na ụgwọ ọrụ na ihe mkpali maka otu ndị ọrụ igodo ọ bụla dabere na usoro ndụ talent.
Ntọala: wulite atụmatụ bara uru nke onye ọrụ ma tinye ya n'ọrụ
Nkwupụta Ọrụ Ndị Ọrụ (EVP) bụ "nkwekọrịta ọrụ", nke gụnyere akụkụ niile nke ahụmịhe onye ọrụ na nzukọ-gụnyere ọ bụghị naanị uru ndị ọrụ (ahụmịhe ọrụ, ohere na ụgwọ ọrụ), kamakwa onye ọrụ ga-alaghachi. nzukọ (ikike ndị ọrụ), mgbali siri ike, imezi onwe onye, ​​ụkpụrụ na omume).
Ụlọ ọrụ ndị na -arụ ọrụ nke ọma na -arụ ọrụ nke ọma n'akụkụ atọ ndị a:
(1). Ụlọ ọrụ na -arụ ọrụ nke ọma na -amụta site na ụzọ esi ekewa ahịa ndị ahịa, ma kewaa ndị ọrụ n'ime otu dị iche iche dịka nka ha si arụ ma ọ bụ ọrụ ha, yana agwa ha dị iche iche na ọnọdụ ọha. E jiri ya tụnyere ụlọ ọrụ na-adịchaghị mma, ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ nke ọma nwere okpukpu abụọ ka ha ga-etinye oge ịghọta ihe na-akpali ndị ọrụ dị iche iche.
(2). Ụlọ ọrụ kachasị arụ ọrụ na -ewepụta atụmatụ ọnụ ahịa ndị ọrụ dị iche iche iji zụlite ọdịbendị na akparamagwa nke nzukọ a chọrọ iji nweta ebumnuche ebumnuche azụmahịa ya. Ụlọ ọrụ kacha arụ ọrụ nwere ihe karịrị ugboro atọ o yikarịrị ka ha lekwasị anya na akparamagwa na -eme ka ụlọ ọrụ nwee ihe ịga nke ọma kama ilekwasị anya na ụgwọ ọrụ.
(3) .Ọdịmma ndị njikwa n'ime otu kachasị arụ ọrụ pụtara ìhè na imezu atụmatụ ndị ọrụ. Ndị njikwa a agaghị akọwapụtara ndị ọrụ “ọnọdụ ọrụ” kamakwa ha ga -emezu nkwa ha (Onyonyo 1). Ụlọ ọrụ nwere EVP na -akwado ma na -agba ndị njikwa ume ka ha jiri EVP mee ihe ga -elebara ndị njikwa na -etinye EVP anya nke ọma.
Strategy: kpọkọta ndị njikwa ka ha mee njikwa mgbanwe dị irè
Imirikiti ọrụ mgbanwe ụlọ ọrụ emezughị ebumnuche ha setịpụrụ. Naanị 55% nke ọrụ mgbanwe ndị gara nke ọma na mbido mbụ, naanị otu ụzọ n'ụzọ anọ nke ọrụ mgbanwe ahụ nwetara ihe ịga nke ọma ogologo oge.
Ndị njikwa nwere ike bụrụ ihe mkpali maka mgbanwe na-aga nke ọma-ebumnuche bụ ịkwadebe ndị njikwa maka mgbanwe ma jide ha ajụjụ maka ọrụ ha na mgbanwe ụlọ ọrụ. Ihe fọrọ nke nta ka ụlọ ọrụ niile na -enye ndị njikwa ọzụzụ nka, mana naanị otu ụzọ n'ụzọ anọ nke ụlọ ọrụ kwenyere na ọzụzụ ndị a na -arụ ọrụ n'ezie. Companieslọ ọrụ kacha mma ga -abawanye itinye ego na ọzụzụ nchịkwa, ka ha wee nye ndị ọrụ ha nkwado na enyemaka karịa n'oge mgbanwe, gee ntị na arịrịọ ha ma nye nzaghachi siri ike na nke siri ike.
Àgwà: Wulite omenala obodo ụlọ ọrụ ma kwalite ịkekọrịta ozi
N'oge gara aga, ụlọ ọrụ lekwasịrị anya n'ịnọgide na -enwe mmekọrịta ọrụ dị n'etiti yana ịhazi njikọ doro anya n'etiti ọrụ ndị ọrụ na nzaghachi ndị ahịa. Ugbu a, ndị ọrụ na -achọsi ike na teknụzụ ọhụrụ na -ewepụta mmekọrịta dị jụụ ma na -arụkọ ọrụ ọnụ n'ịntanetị na n'ịntanetị. Companieslọ ọrụ kacha arụ ọrụ nke ọma na-ewu obodo ụlọ ọrụ-na-akọ symbiosis n'etiti ndị ọrụ na ụlọ ọrụ na ọkwa niile.
N'otu oge ahụ, data na -egosi na ndị njikwa dị mma dị mkpa karịa mgbasa ozi mmekọrịta mgbe ha na -ewu obodo ụlọ ọrụ. Otu njirimara kacha mkpa nke ndị njikwa dị mma na ọnọdụ dị ugbu a bụ ịmalite mmekọrịta ntụkwasị obi na ndị ọrụ ha-gụnyere iji ngwa ọrụ mmekọrịta ọhụụ na iwulite echiche nke obodo ụlọ ọrụ. Companieslọ ọrụ kacha arụ ọrụ nke ọma ga-achọ ndị njikwa ka ha wuo ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ ma mara nka iji nweta ebumnuche a-nkà ndị a enweghị njikọ ma ọ bụ iji mgbasa ozi ọhaneze ọhụrụ.
Oge ezipụ: Aug-18-2021